Fandresena mitohy hatrany
“Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan’Ilay tia antsika” Rom. 8:37
Manana fahafahana hanatsara ny andro sisa iainanao ho amin’ny fanavaozana sy fanondrotana ny toetra ianao. Misy fiainana vaovao miantomboka ao amin’ny fanahy voaova. I Kristy Mpamonjy no honina ao, ka ho tontosa izay nety ho noheverina ho sarotra sy nahakivy. Tsy tokony hotononina akory ny teny jadona sy feno fanambonian-tena, mba hahazoana fandresena sarobidy.
Fifaliana tena marina no ho vokatry ny fandavan-tena sy ny fanomboana ny “izaho”. Rehefa mahazo fandresena iray dia ho mora kokoa ny hahazo izany amin'ny manaraka. Raha nohamaivanin’i Mosesy ny tombontsoa nomen’Andriamanitra azy dia ho nanao tsinontsinona ny fahazavana avy any an-danitra izy ka ho lasa lehilahy feno fahadisoam-panatenana sy alahelo. Avy ao anaty ny fahotana, ka raha leferina izany, dia ho voatahiry ao am-po i Satana hampiredareda ny afobeny. Tsy nametraka ny lalàna mba hisakana ny famonjena ny fanahy Andriamanitra; tiany ho voavonjy aza ny rehetra. Manana fahazavana sy tombontsoa ny olombelona, koa handresy izy raha mampiasa izany. Azonao aseho eo amin'ny fiainanao, amin’ny alalan’ny fandresenao, ny herin’ny fahasoavan’Andriamanitra.
Mikely aina hametraka ny seza fiandrianany ao amin’ny tempolin’ny fo i Satana. Rehefa manjaka izy dia manao izay hihainoana sy hahatsapa azy amin’ny alalan’ny fihetseham-po mirehitra sy teny mahery izay mandratra sy mampalahelo. Toy ny tsy fitambaran’ny fahazavana amin’ny maizina dia tsy misy ifandraisan’i Kristy amin’i Beliala, ka tsy maintsy an’ny iray amin’ireo ihany ny olona. Manome vahana ny foto-kevitr’i Satana ao am-pony izy, ary manakatona ny varavaran’ny lanitra rehefa manome toerana ho an’ny fileferana amin’ny fahotana mitovy amin’ireo. Ny fahotana no nahatonga an’i Satana ho voaroaka tany an-danitra, koa tsy misy olona milefitra sy mikolo fahotana afaka ho any an-danitra, fa raha izany dia mbola nanana toerana tany izy.
Rehefa tena manolo-tena ny handresy ny tsy mety amin’ny toetrany isan’andro ny olona iray, dia mitahiry an’i Kristy ao amin’ny tempolin’ny fony izy, ary ao aminy ny fahazavan’i Kristy. Hisondrotra sy handrianina ny momba azy manontolo eo ambany taratry ny fahazavan’ny endrik’i Kristy. TFC, b.4,tt 345,346.